विषालु सर्पबाट बनेको ओकिनावा वाइन | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > FOOD > विषालु सर्पबाट बनेको ओकिनावा वाइन
यदि हजुर पक्कै पनि अनौठो कुरा खान, वा नया चिज अनुभब गर्न मन पराउनु हुन्न भने, यो लेख हजुरको लागि होइन। तर हजुर अनौठो कुराको पारखी हुनु हुन्छ भने पक्कै पनि यो लेख पढ्नु होला।
हुन पनि को मानिसले चाही जानी जानी बिसालु सर्प पालेर, सर्प बीच प्रजनन गराई त्यसपछि त्यो सर्प लाई मरेर त्यसको बिष प्रयोग गरि स्थानिय वाईन बनाउछन् होला। यो सोच्न पनि अकल्पनीय छ।
तर हुन पनि जापान यस्तै अनौठो र अकल्पनीय कुराहरुको लागि नै त प्रख्यात छ। यी चलनले हजुरलाई कि त उत्शाहित बनाउछ कि त असहज महसुस गराउछ। यहि कुराले पनि जापानलाई आफ्नो जिबनमा एक न एक चोटी घुम्ने पर्ने ठाउँ बनाउछ। जापानको रक्सि लाइ साके भनिन्छ। ठाउँ आनुसार मानिसहरुले साकेमा अनेकौ परिक्षन गरेर नौलो स्वाद दिने गर्दछन।
हाबुश्यु वा हाबू साकेको उत्पति:
(ハブ酒) or Habu Sake
हबु सर्प विषाक्त, नेटिभ सर्प हो जुन दक्षिणपूर्व एशियाली क्षेत्रको वरिपरि पाइन्छ। यो पुरातन र्युक्यू राज्य (琉球 王国), जुन अब ओकिनावा भनेर चिनिन्छ त्यहाँ प्रख्यात छ। विगतमा मानिसहरूले हाबू सर्पले मंगुज मुसाको बढ्दो जनसंख्यालाई कम गरेको देखे। मंगुजले कीराहरू, मुसा र कीराहरू खाने भए पनि अन्नबाली नास गर्ने गर्दथ्यो।
यद्यपि साँपहरूले मंगुज खानाले उनीहरूको आफ्नै जनसंख्यामा पनि वृद्धि भयो जुन लामो समयसम्ममा खतरनाक साबित भएको छ। हाबू सर्प विषाक्त हुन्छन। पछि स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नो सुरक्षाको ’boutमा चिन्ता गर्न थाले। त्यसैले उनीहरुले सर्पको जनसंख्यामा रोक लगाउने सोचे।
त्यस्पस्चात मानिसहरुले यी सर्पलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने नया उपाय सोचे। उनीहरुले सर्पलाइ आफ्नो स्थानीय अवामोरी रक्सीमा प्रयोग गर्ने सोच बनाए। अहिले आएर यो साके यति लोकप्रिय बनेको छ कि, वाइन बनाउने मानिसहरु यो सर्पलाई घरमै पालेर हुर्काएर प्रजनन गराएर रक्सि बनाउन प्रयोग गर्दछन।
कसरि बनाइनछ हाबू साके ?
ハブ酒きました〜 沖縄に住んでいる大学の時の友人が送ってくれたのですが、デカすぎる〜！ 毎日飲んでみよう #5リットル #ハブ酒 #沖縄 #健康的 #効果測定
竹下弘之さん(@titconsulting)がシェアした投稿 – 2019年 2月月12日午後4時31分PST
यो मूलतः सर्पलाई पेटबाट चिरेर एक महिनाको लागि इथानोल बाथमा जोगाउँदै राखिन्छ। तर यी रक्सि बनाउने बिधि भने निकै फरक छ , र यो बास्तबिक विधि बाट बनाउने हो भने त्यो भन्दा बढी समय लिन्छ। रक्सी कसरी बनाउने भन्ने ’boutमा दुई विधिहरू छन्।
पहिलो बिधिमा सर्पलाई ठुलो रक्सीको बोतल मा राखिन्छ र बिर्को लगाएर छोडिन्छ। सर्प त्यहि मर्छ। अर्को तरिकामा सर्पलाई बरफमा राखिन्छ। चिसोले सर्प बेहोस भएछी रगत फालिन्छ।
यो दुइ बिधिबाट रक्सि बनाउनेहरुले त्यसमा अनेकौ किसिमका जडिबुटिहरु थपेर यसलाई बेग्लै स्वाद दिएन गर्दछन। यी दुवै बिधि बाट बनाइएको रक्सि ओकिनावामा पाइन्छ। तर धेरै मानिसहरु माथि उल्लेख गरिएको दोश्रो बिधि रुचाउछन। सर्पलाई पहिले नै चिरेर मरेर रक्सि पार्दा, नराम्रो गन्ध रक्सिमा नआउने भएर हो।
स्वास्थ्यमा फाइदा : झुटो कि साचो
यो अनौंठो पेय पदार्थ पिउने धेरै व्यक्तिहरूको तर्क छ कि हाबुसाकेको आश्चर्यजनक स्वास्थ्य लाभहरू छ।
एउटा हो स्टेमिना र शारीरिक उर्जामा बृद्धि। यी तथ्यहरू यो हो कि हाबू सर्पको अथाह परिश्रम गर्दछ र हप्तौंसम्म पानी मात्रले बाँच्न सक्छ। एक क्रेताले यो पनि रिपोर्ट गरे कि यो रक्सिपिउँदा उल्टै रातभरि आरामदायी निद्रामा मिल्यो।
यद्यपि चाख्नको लागि यी पर्याप्त कारण जस्तो देखिन सक्छ, त्यहाँ कुनै प्रमाणित मेडिकल खोजहरू छैनन् कि उक्त पेयको दावी गरिएको औषधीय फाइदाहरू वास्तवमै अवस्थित छन्। यसको अतिरिक्त, विशेषज्ञहरूले पिउनेहरूलाई सतर्क हुन चेतावनी दिन्छन्, विशेष गरी यदि तपाईंलाई पेट समस्या छ भने यो रक्सि नखान सल्हा दिन्छन।
जबकि तपाईंको पेटको एसिड र रक्सीको मिश्रणले सर्पको विषलाई भंग गर्न सक्दछ, तर तपाइको पेटमा घाउ छ भने एक गिलास वा दुई पिए पछि तपाईंलाई राम्रो नलाग्न सक्दछ।
यो रक्सि को कति पर्दछ?
松林 健太郎.さん(@m.kentaro_.3)がシェアした投稿 – 2019年 2月月9日午後2時08分PST
मूल्य आकार र वितरकको आधारमा फरक हुन्छ। यस्तो नौलो अनुभब गर्ने भए पक्कै पनि सर्प रखिएको रक्सि किन्दा राम्रो हुन्छ। तर यस्तै खालको रक्सिलाई भने महँगो मूल्य पर्दछ। एउटा बोतल को १ लाख बढी पर्ने पनि हुन सक्छ।
वाइन तपाईंको आराम गर्न र तपाईंको साथीहरूसँग राम्रो च्याटको आनन्द लिनको लागि मनपर्ने पेय पदार्थ हुन सक्छ। तर के तपाईं अझै पनि सर्प रखिएको वाइनखादा त्यस्तै महसुस गर्नुहुनेछ? पता लगाउने एक मात्र तरिका ट्राइ गरेर हेर्ने हो
venemous snake e